Fomba 4 manatsara ny varotra haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Miaraka amin'ny olona marobe tafiditra amin'ny tambajotra sosialy an-tserasera isan'andro, ny media sosialy dia lasa ampahany lehibe amin'ny paikady marketing ho an'ny orinasa isan-karazany.
Nisy mpampiasa Internet 4.388 miliara manerantany tamin'ny taona 2019, ary 79% amin'izy ireo no mpampiasa sosialy mavitrika.
Rehefa ampiasaina amin'ny fomba stratejika, ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia afaka mandray anjara amin'ny fidiram-bolan'ny orinasa iray, ny firotsahany ary ny fanentanana azy, fa ny hoe eo amin'ny media sosialy fotsiny dia tsy midika hoe fampiasana izay rehetra notahirizin'ny media sosialy ho an'ny orinasa. Ny tena zava-dehibe dia ny fampiasanao ny fantsona sosialy, ary eo no ahafahana miseho ny fahafaha-manao amin'ny alàlan'ny fianarana milina.
Handalo ny fipoahan'ny data izahay, saingy tsy ilaina io data io raha tsy voadihady. Ny fianarana ny milina dia ahafahana mamakafaka ireo angon-drakitra tsy misy fetra ary mahita lamina miafina ao aoriany. Ampiasaina amin'ny alàlan'ny mpanolotsaina fianarana milina, ity teknolojia ity dia manatsara ny fomba fanovana ny angona ho lasa fahalalana ary ahafahan'ny orinasa manao vinavina marina sy fanapahan-kevitra mifototra amin'ny zava-misy.
Tsy ireo tombony rehetra ireo, koa andao jerena akaiky ireo lafiny orinasa hafa azo hatsaraina amin'ny fianarana milina.
1. Fanaraha-maso ny marika / fihainoana ara-tsosialy
Ny fahombiazan'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia voafaritry ny lafin-javatra maro, ary angamba ny iray amin'ireo fiantraikany lehibe indrindra amin'izy ireo dia ny lazan'ny Internet. Araka ny ny fanadihadiana momba ny mpanjifa eo an-toerana, 82% amin'ireo mpanjifa no mizaha hevitra amin'ny Internet momba ny orinasa, isaky ny mamaky hevitra 10 eo ho eo alohan'ny hatokisany orinasa. Manaporofo izany fa zava-dehibe ny fanaovana dokambarotra tsara ho an'ny marika, izany no ilana mpitantana mitady fomba hitantanana tsara ny lazan'ny orinasa.
Ny fanaraha-maso ny marika dia vahaolana tonga lafatra, izany dia ny fikarohana izay voalaza momba ny marika amin'ny loharanom-baovao rehetra misy, ao anatin'izany ny media sosialy, forum, bilaogy, hevitra an-tserasera, ary lahatsoratra. Ny famelana ny orinasa hahita olana alohan'ny hitomboany amin'ny krizy sy ny fihetsiny rehefa mandeha ny fotoana, ny fanaraha-maso ny marika dia manome fahatakarana feno an'ireo mpanatrika kendrena aminy ihany koa, ary amin'izany dia mandray anjara amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa.
Ahoana no hanampian'ny fianarana ny milina amin'ny fanaraha-maso ny marika / fihainoana ara-tsosialy
Amin'ny maha fototry ny fanadihadiana mialoha ny vinavina, ny fianarana ny milina dia manampy amin'ny fahatakaran'ny mpanapa-kevitra tsara ny fizotran-javatra rehetra mitranga ao amin'ny orinasan'izy ireo, mba hahatonga ny fanapahan-kevitr'izy ireo ho lasa data-mifototra kokoa ary mifantoka amin'ny mpanjifa, ary mahomby kokoa.
Eritrereto izao ny momba ny asanao rehetra misy amin'ny Internet — firy amin'izy ireo no hisy? -Jatony? An'arivony? Ny fanangonana sy famakafakana azy ireo amin'ny tanana dia tsy fanamby sarotra tantanana, fa ny fianarana ny milina kosa dia manafaingana ny fizotrany ary manome ny famerenana amin'ny antsipiriany ny marika.
Raha tsy hoe mifandray aminao mivantana amin'ny alàlan'ny telefaona na mailaka ny mpanjifa tsy sambatra, ny fomba haingana indrindra hahitana sy hanampiana azy ireo dia ny famakafakana ny sentiment — ny setin'ny algorithma fianarana milina izay manombana ny hevitry ny besinimaro momba ny orinasanao. Manokana, ny fanamarihana marika dia voasivana amin'ny toe-javatra ratsy na tsara mba hahafahan'ny orinasanao mihetsika haingana amin'ireo tranga mety hisy fiatraikany amin'ny marikao. Ny fametrahana ny fianarana milina dia ahafahan'ny orinasa manara-maso ny hevitry ny mpanjifa na inona na inona fiteny nanoratana azy, izay manitatra ny sehatry ny fanaraha-maso.
2. Fikarohana mpihaino kendrena
Ny mombamomba ny Internet dia mety hilaza zavatra maromaro, toy ny taonan'ny tompony, ny lahy sy ny vavy, ny toerana misy azy, ny fialamboly, ny vola miditra, ny fahazarana miantsena ary maro hafa, izay mahatonga ny media sosialy ho loharanom-baovao tsy manam-petra hanangonana orinasa momba ny mpanjifany sy ny olony ankehitriny. izay tian'izy ireo ampandraisina. Noho izany, ny mpitantana marketing dia mahazo fotoana hianarana momba ny mpihaino azy, ao anatin'izany ny fomba fampiasana ny vokatra na serivisy an'ny orinasa. Manamora ny fizotran'ny fikarohana lesoka amin'ny vokatra izany ary manambara ny fomba mety hampiroboroboana ny vokatra.
Azo ampiharina amin'ny fifandraisan'ny B2B ihany koa izany: miorina amin'ny mason-tsivana toy ny haben'ny orinasa, ny vola miditra isan-taona, ary ny isan'ny mpiasa, ny mpanjifa B2B dia mizara ho vondrona iray, ka ny mpivarotra dia tsy mila mahita efijery tokana. vahaolana fa lasibatra ireo fizarana samihafa amin'ny alàlan'ny fomba fanao mety indrindra amin'ny vondrona iray.
Ahoana no hanampian'ny fianarana ny milina amin'ny fikarohana ny mpihaino kendrena
Ireo manampahaizana manokana momba ny varotra dia manana angona be dia be hiatrehana — voaangona tamin'ny loharano maromaro, mety ho toa tsy misy farany izany raha ny momba ny profilingan'ny mpanjifa sy ny famakafakana ny mpihaino. Amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny fianarana milina, manamaivana ny fizotry ny famakafakana ireo fantsona isan-karazany sy ny fakana vaovao sarobidy amin'izy ireo ny orinasa. Amin'ity fomba ity, ny mpiasanao dia afaka mampiasa angon-drakitra efa vita vonona hiankina amin'ny fizarana ny mpanjifa.
Ary koa, ny algorithma fianarana ny milina dia afaka manambara ny lamin'ny fitondran-tenan'io na ny vondron'ireo mpanjifa, manome ny orinasa fotoana ahafahana manao vinavina mazava kokoa ary hampiasa ireo mba hahazoany tombony amin'ny tetika.
3. Famantarana sary sy horonan-tsary
Amin'ny taona 2020, ny fanekena ny sary sy ny horonan-tsary dia teknolojia vao misondrotra ilaina amin'ny orinasa rehetra izay te hanana fifaninanana. Ny haino aman-jery sosialy, ary indrindra ireo tamba-jotra toy ny Facebook sy Instagram, dia manome sary sy horonan-tsary marobe tsy voafetra navoakan'ny mety ho mpanjifanao isan'andro, raha tsy isa-minitra.
Voalohany indrindra, ny fanekena sary dia ahafahan'ny orinasa mamantatra ireo vokatra tian'ireo mpampiasa. Rehefa dinihina ity fampahalalana ity dia ho azonao atao tsara ny mikendry ny fampielezan-kevitrao fivarotana mba hamidy sy hivarotra raha toa ka efa mampiasa ny vokatrao ny olona iray, ary ampirisiho izy ireo hanandrana izany amin'ny vidiny manintona kokoa raha toa ka mampiasa ny vokatra mpifaninana izy ireo. . Ary koa, ny teknolojia dia manampy amin'ny fahatakarana ny mpihaino kendrenao, satria ny sary indraindray mety hiteny bebe kokoa momba ny vola miditra, ny toerana misy azy ary ny zavatra mahaliana azy noho ny mombamomba tsy dia feno loatra.
Fomba iray hafa ahazoan'ny orinasa misitraka tombony amin'ny fanekena sary sy horonan-tsary ny fahitana fomba vaovao azo ampiasana ny vokatra. Ny Internet ankehitriny dia feno sary sy horonan-tsary misy olona manao fanandramana ary manao zavatra tsy mahazatra amin'ny fampiasana ireo vokatra mahazatra indrindra amin'ny fomba vaovao tanteraka — koa maninona raha ampiasainao izany?
Ahoana ny fomba fanampiana ny milina amin'ny fahalalana sary sy horonan-tsary
Ny fianarana ny milina dia ampahany tena ilaina amin'ny fankatoavana ny sary sy ny horonan-tsary, izay miorina amin'ny fiofanana tsy miova izay mety ho azo atao raha tsy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny algorithma mety sy ny fitadidian'ny rafitra ireo lamina.
Na izany aza, ny sary sy ny horonan-tsary izay toa mahasoa aloha dia tokony ho hita eo amin'ireo fampahalalana marobe azo avy amin'ny media sosialy, ary rehefa manamora ny asa fitoriana ny fianarana ny milina izay saika tsy azo atao izany raha atao tanana. Nohamafisin'ny teknolojia fianarana milina mandroso, ny fahafantarana ny sary dia mety hampiroborobo ny orinasa mankany amin'ny tanjona kendrena vaovao tanteraka, manome fomba fijery miavaka momba ny mpanjifa sy ny fomba fampiasan'izy ireo vokatra.
4. Fikendrena sy fanohanana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny Chatbots
Mihamaro ny olona ankehitriny no manaiky ny fandefasan-kafatra ho fomba mety indrindra hifaneraserana, izay manome ny orinasa fotoana vaovao hisarihana ny mpanjifa. Miaraka amin'ny fiakaran'ny resadresaka amin'ny ankapobeny sy ny fampiharana mifampiresaka toa ny WhatsApp sy Facebook Messenger, nanjary fitaovana marketing mahomby ny chatbots — mandamina fampahalalana isan-karazany izy ireo ary afaka mamaly ny fangatahana isan-karazany: manomboka amin'ny fanontaniana mahazatra ka hatramin'ny asa mahatafiditra mpanova maromaro.
Tsy toy ny rohy fitetezana sy pejin-tranonkala mahazatra, ny chatbots dia manome ny mpampiasa fahafaha-mikaroka sy mizaha amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy na fampiharana fandefasan-kafatra tian'izy ireo. Ary na dia eo aza ny varotra nomerika nentim-paharazana amin'ny alàlan'ny sary, ny lahatsoratra ary ny horonan-tsary, ny bots dia manamora ny fifandraisan'ny marika amin'ny mpanjifa tsirairay avy hatrany ary hananganana fifanakalozan-kevitra toa ny olombelona.
Chatbots nampiroborobo amin'ny fianarana machine
Ny ankamaroan'ny chatbots dia mihazakazaka amin'ny algorithma fianarana milina. Raha chatbot dia asa iray mifantoka amin'ny lahasa, na izany aza, dia afaka mampiasa fandaharana sy fitsipika neuro-linguistic mba hanomezana valiny voarindra amin'ireo fangatahana ankapobeny indrindra nefa tsy mitaky ny fianarana milina hanohanana ireo fahaiza-manao fototra.
Mandritra izany fotoana izany dia misy chatbots atosiky ny angona azo vinavina — miasa ho mpanampy manan-tsaina, mianatra eny an-dalana izy ireo hanome valiny sy tolo-kevitra mifandraika amin'izany, ary ny sasany aza mety maka tahaka ny fihetsem-po mihitsy. Ny chatbots tarihin'ny data dia ampiasain'ny fianarana milina, satria ampiofanina tsy tapaka izy ireo, mivoatra ary manadihady ny safidin'ny mpampiasa. Miaraka, ireo zava-misy ireo dia mahatonga ny fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny orinasa iray manokana: mametraka fanontaniana, manome fampahalalana mifandraika, miombom-pihetseham-po ary mivazivazy, ireo chatbots dia manintona izay tsy azon'ny doka nentim-paharazana.
Miaraka amin'ny chatbots manan-tsaina, ny orinasa dia afaka manampy mpanjifa marobe tsy voafetra na aiza na aiza ary na aiza na aiza misy azy ireo. Mitahiry vola sy fotoana ary manatsara ny traikefan'ny mpanjifa, ny chatbots dia lasa iray amin'ireo faritra AI mahasoa indrindra hampiasa vola amin'ny orinasa sy orinasa midadasika.
Tags: aifahaizana artifisialyb2bfomba fitondran-tenafanaraha-maso ny marikalazan'ny marikafianarana milina chatbotchatbotskendrena ho an'ny mpanjifateknolojia vao misondrotratatitra momba ny nomerika manerantanyfanekena saryfianarana milina fanekena sarympanampy manan-tsainafianarana milinafanaraha-maso ny marika fianarana milinafianarana milina fihainoana ara-tsosialyhaino aman-jery sosialy fianarana milinavinavina Analyticsfanohanan'ny mpanjifa sosialySocial Media Marketinglasibatra amin'ny media sosialyfikarohana ho an'ny mpihaino kendrenafanekena horonantsaryfianarana milina fanekena horonan-tsary
ICanLocalize: Adikao tsara ny tranokalan'ny orinasanao hahatratrarana mpihaino vaovao